190109 15958 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00104 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-104 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 15968 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00103 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-103 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 15978 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00322 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-322 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 15988 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00321 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-321 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 15998 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00354 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-354 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16008 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00353 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-353 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16018 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00040 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-40 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16028 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00039 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-39 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16038 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00233 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-233 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16048 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00234 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-234 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16058 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00311 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-311 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16067 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00311 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-311 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16079 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16089 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16099 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 161010 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16119 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16128 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16138 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.
190109 16148 viewsBinduli, Mineral Resources Ltd empty iron ore train 4030 with MRL's MHPY type iron ore waggon MHPY 00312 built by CSR Yangtze Co China serial 2014/382-312 in 2014 as a batch of 382 units, these bottom discharge hopper waggons are operated in 'married' pairs.